Ungayitshisa njani iFlip yeVidiyo kunye neMifanekiso kwiiDVD ezinesixhobo seDVD yeWindows
NguJoe Hutsko, uDrew Davidson
Ukutshisa ikopi ye-movie yakho okanye iifoto zesilayidi kwi-DVD disc ikwenza ukuba wenze idiski ongayinika okanye uyithumele komnye umntu, onokonwabela imovie yakho kwikhompyuter yeTV. Isenzi seDVD seWindows sibandakanyiwe kwiWindows Vista yasekhaya yePremiyamu kunye nohlelo lokugqibela, kunye nePrimiyamu yasekhaya yeWindows, uProfessional, Enterprise, kunye noHlelo lokugqibela.
ingakanani i-hydrocodone eku-hydromet
Ukuba uguqulelo lwakho lweWindows aluzanga noMenzi weDVD yeWindows, cinga ngokuthenga inkqubo etshisa iDVD, ukuphucula iWindows 7.
Ukutshisa iiDVD usebenzisa iWindows DVD Maker okanye enye inkqubo yokutshisa iDVD, kufuneka ube nePC eneDVD drive enokubhalela iDVD. Ukuba ikhompyuter yakho iDVD drive ye-Windows ayikwazi ukubhala kwi-DVD, ungathenga i-DVD drive yangaphandle ekwaziyo ukutshisa iDVD, okanye ungadlulisela iprojekthi yakho yeDVD kwenye iPC ukwenza iDVD yakho.
Ukutshisa ifayile bhanyabhanya kwiDVD usebenzisa uMenzi weDVD yeWindows, landela la manyathelo:
Qalisa uMenzi weDVD yeWindows ngokukhetha ukuqala, iiNkqubo, uMenzi weDVD yeWindows.
Inkqubo yokwamkela yeWindows yeWindows DVD iyavela.
Cofa kwiifoto kunye neeVidiyo.
Yongeza imifanekiso kunye nevidiyo kwifestile yeDVD.
Cofa indawo yokongeza Izinto ukuvula iAdv Izinto kwibhokisi yencoko yeDVD, emva koko uye kwifolda equlathe ividiyo okanye ifayile yefayile (okanye iifayile).
Eliquis 5 mg amaxabiso
Iifayile zevidiyo obukhuphele ngaphambili kwiFlip yakho kwiPC yakho usebenzisa iFlipShare zigcinwa kwiVidiyo zam, kwiFlipShare Idatha, kwifolda yeVidiyo, onokuyifumana kwifolda yekhaya.
Cofa ividiyo okanye umfanekiso wefayile ofuna ukuyongeza kwiDVD yakho, emva koko ucofe iqhosha u-Yongeza.
Ukukhetha ngaphezulu kwe-icon enye yefayile, bamba iqhosha loLawulo kwaye ucofe uphawu lwefayile nganye ofuna ukuyongeza kwiDVD yakho.
Olona nyango luphambili lokugula
Ifayile yakho oyikhethileyo (okanye iifayile) iyavela kwi Yongeza imifanekiso kunye nevidiyo kwiwindows yeDVD.
(Ngokuzithandela) Yongeza, ucime, okanye uhlengahlengise iifayile zakho zevidiyo okanye umfanekiso Iifayile zomboniso wesilayidi kunye neefayile kwi-Yongeza imifanekiso kunye nevidiyo kwiwindows yeDVD.
(Ngokukhetha) Cofa kabini umhla kumxholo wesihloko seDVD kwaye uchwetheze igama leDVD yakho enomdla ngakumbi kwaye ichazayo kunegama elingaginyisiyo esele ligcwalisiwe kuwe.
(Ngokuzikhethela) Cofa kwikhonkco lokukhetha kwikona esezantsi ekunene ukuvula i-windows ongakhetha kuyo, emva koko ucofe nayiphi na into ofuna ukuyitshintsha.
Cofa kwindawo ethi Ndilutshintsha njani useto lweDVD yam? ikhonkco lokuvula iwindow yoncedo ukuze ufunde okungakumbi malunga nokukhetho.
iziphumo zecryester testerone
Cofa u-Okulandelayo ukubonisa iWindows ekuLungele ukutshisa iwindow.
(Ngokuzikhethela) Cofa kwaye utsale iscrolbar kwisilayida kumda wasekunene wefestile ukuze ukhangele izitayile zemenyu eyahlukeneyo kwiDVD yakho. Cofa isitayile ukukhetha eso sitayile.
(Ngokuzikhethela) Cofa kwiMenyu yokubhaliweyo, Yenza ngokwezifiso iMenyu, okanye amaqhosha eMboniso weSilayidi ukuze uhlengahlengise okanye wenze ngokwezifiso ezo zinto kwiDVD yakho
Ukudlala ujikeleze kwezi ndlela kukuqhuma kuba ubona umbono wento oyenzayo ngaphandle kokuyisebenzisa ngaphandle kokuba ufuna ngokwenene.
(Ngokuzithandela) Cofa iqhosha lokujonga kuqala nangaliphi na ixesha ukujonga indlela i-movie yakho eza kuvela ngayo xa umntu ebukele iDVD oyenzileyo.
Ibhokisi yencoko yababini ibonakala ikukhuthaza ukuba ufake iDVD engenanto.
Faka iDVD engenanto kwi-DVD drive yekhompyuter yakho.
Ukuba ibhokisi yencoko yababini yeWindows AutoPlay iyavela, cofa u-Vala ukuze uyivale.
Ukuba ibhokisi yencoko yababini ibonakala ichaza ukuba iDVD yakho sele inawo umxholo kuyo, cofa u-Ewe ukuba ufuna uMenzi weDVD ukuba abhale ngaphezulu nawuphi na umxholo okwidiski kunye nomdlalo bhanyabhanya omtsha weDVD, okanye ucofe u-Hayi ukuba ufuna ukuyikhupha iDVD kwaye ufake enye iDVD. .
s 90 3 ixabiso lesitalato
Ibhokisi yencoko yencoko yababini ibonakala ngelixa iWindows DVD Maker itshisa ifayile yakho ye-movie kwi-disc, ilandelwa ngomnye ibhokisi yencoko yababini ekuvumela ukuba wazi xa iDVD yakho ilungile.
Uyenza njani ifayile yeMP3
Umsebenzi wakho weFowuni ye-Android yokuPhupha
Izihloko ze-WordPress zasimahla ze-2017
I-A007 PREG 25 (Pregabalin 25 mg)
Kwindlela yokuGrafa ukungalingani kwamanqaku
ukutya okunenqanaba eliphezulu le potassium
yintoni roxy 30
Ngaba amaKhatholika akholelwa kuthixo